वामनलाई रक्षासचिवमा फर्काइने | BIVAS
← सुदले कोइरालालाइ भेटेर के सल्लाह दिए ?	प्रधानमन्त्री नेपाललाई एक करोडको गाडी →	वामनलाई रक्षासचिवमा फर्काइने	01
माओवादी नेतृत्वको सरकारद्वारा रक्षासचिवबाट हटाइएका वामनप्रसाद न्यौपानेलाई नयाँ सरकारले पुनः रक्षामा फर्काउने भएको छ । सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले न्यौपानेलाई जगेडामा राखेको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएका वेला न्यौपानेलाई रक्षासचिव बनाइएको हो । कोइरालाकै निर्देशनअनुसार सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले उनलाई जगेडामा लगेको थियो ।
वर्तमान सरकारका अभिभावक कोइरालाकै आग्रहअनुसार वर्तमान सरकारले न्यौपानेलाई रक्षामा फर्काउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । यही योजनाअनुसार बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइसकेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकले उनलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार न्यौपानेलाई रक्षामा पुर्‍याउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री नेपालले रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीलाई विशेष निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री नेपालले भने शपथग्रहणकै दिन निजामती प्रशासनमा हस्तक्षेप नहुने र कार्यक्षमताका आधारमा मूल्यांकन गरिने भन्दै सचिवहरूलाई निडर भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । सेवाअवधि सकिएका आठ जर्नेललाई अवकाश दिने सरकारी तयारीमा असहयोग गरेको भन्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले न्यौपानेलाई हटाएको हो । यसैविच रक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो सरकारद्धारा अवकाश दिइएका आठ जर्नेलहरुको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार रक्षा मन्त्रालयमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
रक्षा मन्त्री विद्या भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकमा रक्षा सचिव गणेश जोशी सहसचिव श्रीधरप्रसाद पोखरेल लगायतको उपस्थिती थियो । आठ जर्नेलको पुर्नवहालीका विषयमा रक्षा मन्त्री भण्डारीले विभिन्न कानुन व्यवसायीसँग सरसल्लाह लिएकी थिइन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले आठ जर्नेललाई गत चैत २ गते लागू हुनेगरि म्याद नथपेर अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले संयुक्त रुपमा चैत ९ गते सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट न्यायाधिश कैलाशकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले आठ जर्नेललाई काममा फर्काउन आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशअनुसार पुर्नवहाली भएका जर्नेलहरुमा सैनिक समाचार निर्देशनालयका पवनबहादुर पाण्डे, कल्याणकारी निर्देशनालयका रमेश बुढाथोकी, अनुसन्धान तथा विस्तार निर्देशनालयका प्रदीपविक्रम राणा, शिवपुरीस्थित स्टाफ कलेजका नरेन्द्र रावल, जङ्गी अड्डाका रमेश बिष्ट, आर्टिलरी निर्देशनालयका शिवकुमार पौडेल, उपत्यका पृतनाका राजुप्रताप केसी र सैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत नरबहादुर कँडेल रहेका छन् ।
← सुदले कोइरालालाइ भेटेर के सल्लाह दिए ?	प्रधानमन्त्री नेपाललाई एक करोडको गाडी →	One response to “वामनलाई रक्षासचिवमा फर्काइने”	chintankochautari	जुन 1, 2009 at 9:34 बिहान	पहिलेका सरकारले गरेका कामहरूलाइ उल्ट्याउदै जाने क्रममा यो सरकारले भोली राजालाइ पनि पुनस्थापीत गर्न अवश्यै पहल गर्ला भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु ।